Azia Atsimo: Fanehoan-kevitra tamin’ny Rivo-doza Katrina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Novambra 2018 3:03 GMT
Niteraka fanehoan-kevitra maro tao amin'ny tontolon'ny bilaogy ny rivo-doza Katrina. Bilaogy Aziatika Atsimo maro no nahita ity loza ity ho fampahatsiahivana ny loza voajanaharin'ny Tsunami tany amin'ny Oseana Indiana ny volana Desambra 2004 sy ny tondra-drano tao Mumbai.
Manana lahatsoratra momba ny fanehoan-kevitra tamin'ny voina tany Etazonia ny Chapati Mystery. Taorian'ny Katrina, dia nanan-javatraaro holazaina i Taz Ahmed – miainga amin'ny fahitalavitra, Oprah mankany amin'ny ezaka fototra. Manontany tena ny lahatsoratra iray tao amin'ny Intentblog raha efa nampihatra ny politikan'Andriamanitra amin'ny fandinihina sy ny fiandrasana ny fitondran'i Bush. Manan-kolazaina momba ny “Mangarahara sy Katrina ” ny Samudaya.org. Namoaka ny fialantsiny misimisy kokoa avy amin'ny governemanta i Zoostation ary namely ny valintenin'ny Rev. Bill Shanks .
Mametraka fanontaniana momba ny firazanana, ny fandrobana ary nanome rohy mankany amin'ny bilaogy hafa manadihady ireo olana mitovy amin'izany i Ahmed Bilal. Manana fahatsiarovana ny New Orleans i Dilip ary manontany ny antony mahatonga ny fifaninanana amin'ny fametrahana izay mijaly bebe kokoa. Namoaka sary manaitra tamin'ny Tondra-dranon'i Mississippi tamin'ny taona 1927 i Amardeep Singh, ary nanonona an'i Robert Frost.
Manana lahatsoratra momba ny eso tsy nampoizina nataon'i BoingBoing i Flotsam. Manontany ny fitotonganan'ny fiarovana any amin'ny faritra misy ny rivo-doza raha ampitahaina amin'ny tondra-drano tany Mumbai i POV, ary nanome ny rohy mankany amin'i Maitri, bilaogera Indiana avy any New Orleans. Manana lahatsoratra manontany momba ny fahombiazan'ny FEMA tamin'ny “kandidan'ny fema-nokuria” i the olive ream . Mampitaha ny fanehoan-kevitra tamin'ny voinan'ny Tsunami sy Katrina ny Indi.ca . Manana lahatsoratra momba ny zava-niseho taorian'ny voina sy ny fanarenana i Days go by... Nijery ny adihevitra an-tserasera momba ny toe-draharaha sy ny lesona azo raisina tamin'izany i Rezwan, ary ny lahatsoratra iray hafa momba izay nataon'i Bangladesh ho an'ireo tra-boina .